Ra’isul Wasaare Matteo Renzi oo is casilay kadib markii uu ku fashilmay Afti uu soo abaabulay-sawiro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 5 December 2016
Ra’isul Wasaare Matteo Renzi oo is casilay kadib markii uu ku fashilmay Afti uu soo abaabulayRaisul Wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi ayaa shaaca ka qaaday in uu is casilay kana degay xilka uu gayay, kadib markii looga guuleestay afti loo qaadayay isbadal lagu sameeyo dastuurka dalkaasi.
Matteo Renzi oo xalay shir jaraa’id u qabtay Warbaahinta ayaa cadeeyay in uu is casilay, waxa uuna sheegay inuu qaadayo masuuliyadda natiijada ka soo baxday aftida dadweynaha laga qaaday, waxaana wajiga R/Wasaaraha ka muuqday sida uu uga xumaa guul darada soo wajahday.
Ra’isul Wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa isagu keenay qorshaha in isbadal lagu sameeyo dastuurka Talyaaniga loona qaado afti dadweyne, hasa ahaatee aftidii loo qaaday arintaasi ayaa in ka badan %60 diideen in isbadal lagu sameeyo dastuurka.
Aftida loo qaadayay isbadalka lagu sameenayo dastuurka dalka Talyaaniga waxaa usoo baxay oo codadkooda dhiibtay %70 kamid ah dadka Talyaaniga, waxaana muuqata in dad badan aysan dhagta jalaq u siin codsigii R/Wasaaraha ee ahaa in ay codkooda ka dhiibtaan.
Tagged talyaani, talyaniga